Qodobadii ugu mudnaa ee Farmaajo kusoo qaadey khudbadiisa shirka UN-ka?
Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka loodhan yahay ee UN-ka
By Villa Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Khudbad ka jeediyey Meertada 75-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa ka warbixiyey horumarrada dowladdu ay ka xaqiijisay amniga iyo siyaasadda, saameynta cudurka safmarka ah ee Karoona iyo caqabadaha dhaqaale ee uu sababay.
Madaxweynaha ayaa dul istaagay qorshaha Dowladda ee hirgelinta doorasho hufan oo sii xoojinaysa dimuqraadiyadda iyo daahfurnaanta siyaasadeed ee dalka, waxa uuna tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay ku tilmaaman yihiin isu tanaasul iyo is-qancin oo fure u ah xasilloonida siyaasadeed, midnimada iyo wadajirka.
“Inkastoo cudurka safmarka ee Karoonaha uu caqabad ahaa, haddana waxaan ku howlannahay ka shaqaynta hannaan doorasho loo dhanyahay, taas oo dadka Soomaaliyeed ay kaga go’aan gaari karaan mustaqbalkooda. Waxaa naga go’an in aan meelmarinno oo aan xoojino dhaqanka dimuqraadiga ah.”
Madaxweynaha ayaa la wadaagay hoggaamiyeyaasha Caalamka in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay xoogga saareen xakameynta Cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo saameynta dhaqaale ee uu reebay, isaga oo bogaadiyey dadaalkii naf hurnimada lahaa ee Shaqaalaha Caafimaadku ay ku badbaadiyeen shacabkeenna.
“Waxaan bogaadinayaa dhammaan shaqaalaheenna caafimaadka ee geesiyaasha ah kuwaas oo naftooda halis u galiyay si ay shacabkeenna u badbaadiyaan. Waxaan aqoonsannahay samirka iyo garab istaagga ganacsata Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeeyay dowladda.”
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa tilmaamay in guulo la taaban karo laga gaaray la dagaallanka argagixisada Alshabaab, iyada oo ay iskaashanayaan ciidamadeenna geesiyaasha ah iyo saaxiibbada caalamiga ah, si loo ciribtiro arxan laaweyaashan, loogana hortago in Soomaaliya ay gabbaad ka dhigtaan.
Ugu danbeyntii, Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa Hoggaamiyeyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay in mudnaanta la siiyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee ku aaddan caqabadaha iyo dhibaato wadareedka ka taagan dunida, si looga faa’iideysto fursad kasta oo lagu gaari karo duni nabdoon, horumarsan oo barwaaqana ah.
Muxuu yahay ujeedka safarka Wasiir Cawad ee China?
Soomaliya 10.07.2018. 10:35
Wasiirka ayaa mudooyinkii dambe socdaallo kala duwan ku bixinayay dalal ay kamid yihiin...
Farmaajo oo "baadigoobaya" muddo kororsi laba sano ah
Soomaliya 20.02.2020. 16:17
Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Muqdisho [Fah-faahin]
Soomaliya 16.06.2018. 18:03
Soomaliya 25.04.2018. 12:09
Prof Cabdi Ismaaciil oo ka hadlay Khilaafka madaxda dowladda Soomaaliya
Soomaliya 04.04.2018. 23:36
Farmaajo oo xil u dhiibay xubin ka tirsanaa kooxdiisa ololaha doorashada
Soomaliya 25.11.2019. 06:58
XOG: RW Khayre iyo CC Shakuur oo la dhex-dhexaadinayo
Soomaliya 21.02.2018. 19:26